निरुता सिंहको कमव्याक कस्तो रह्यो ? | Sagarmatha TVSagarmatha TV निरुता सिंहको कमव्याक कस्तो रह्यो ? | Sagarmatha TV
निरुता सिंहको कमव्याक कस्तो रह्यो ?
काठमाडौं । पुरानी अभिनेत्री निरुता सिंह चलचित्र ‘नाईं नभन्नू ल ५’बा कमब्याक भइन् । लामो समय नेपाली चलचित्रबाट टाढा रहेकी सिंह चाँडै नेपाली चलचित्रबाट कमब्याक गर्ने भनिरहँदा उनलाई नेपाली चलचित्रमा पुनः इन्ट्री हुन ‘नाइ नभन्नू ल ५’ कुर्नुप¥यो । यो बीचमा उनी भारतमा रहेकी थिइन । नेपालमा भएको एक कार्यक्रमका लागि नेपाल आएका बेला नाइ नभन्नु ल युनिटले गरेको आग्रहलाई उनले नकारिनन् । छोटै रोल भए पनि उनले चलचित्रमा अभिनय गरिन् ।
उनलाई माया गर्ने दर्शकको ठूलो भीड पनि देखियो । चलचित्रले सफलता पाएसँगै उनको पुनरागमन सुखद् रहेको पुष्टि भएको छ । त्यसोत दशक अगाडिकी निर्विकल्प अभिनेत्री थिइन्– निरुता । एक सय बढी फिल्ममा अभिनय गरिसकेकी उनले अधिकांश चलचित्र हिट दिएकी थिइन् । नेपाली फिल्ममा नयाँ पुस्ताको आगमनसँगै उनी पर्दाबाट हराइन् । लामो समयदेखि उनी मुम्बईमा बस्दै आइरहेकी छन् । वर्षौसम्म पर्दामा नदेखिँदा निरुतालाई नेपाली दर्शकले ‘मिस’ नगर्ने कुरै थिएन । अन्ततः दशकपछि उनको नेपाली फिल्ममा कमब्याक गरिन् पनि ।
हाल उनको कमब्याक फिल्म ’नाईं नभन्नू ल ५’ प्रदर्शनरत छ । यस वर्ष एनएफडिसी अवार्डमा सहभागी हुन नेपाल आएको समयमा उनले यो फिल्म साइन गरेकी थिइन् । बाल कलाकार अनुभव रेग्मीको आमाको भूमिका निर्वाहा गरेकी उनको फिल्ममा थोरै सिन छ तर यादगार छ । वर्षौपछि दर्शकले ‘दर्पण छायाँ’ जोडीलाई एउटै फ्रेममा भेट्नेछन् ।
‘नाइँ नभन्नू ल–५’ ले निरुताको ईन्ट्रीसँगै आफ्नो गति समातेको छ । अनुभवसँग फोनमा कुरा गर्दा उनको एक इमोसनल सिनले फिल्ममा प्राण भरेको छ । दर्शकले उनको भूमिकामा खोट लगाउने ठाउँ पाउँदैनन् । थोरै सिन भएपनि उनको अभिनय वजनदार छ । गत शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको उक्त फिल्मले घरेलू बजारमा गरेको आक्रामक कलेक्सनले पनि निरुताको कमब्याकलाई थप विशेष बनाएका छ ।
फिल्मले प्रदर्शनको दुई दिनमा नै करोड ग्रस कलेक्सन गर्न सफल भएको हल व्यवसायीको दाबी छ । शुक्रबार औसत रहेको फिल्मको व्यापार शनिबार आक्रामक व्यापार गरेको थियो । लगातार परेको सार्वजनिक विदाले पनि ‘नाइँ नभन्नू ल–५’ ले पहिलो हप्ताबाटै लगानी सुरक्षित गरेर नाफाको बाटोमा दौडिने संकेत देखाएको छ ।
विकासराज आचार्य निर्देशित ‘नाइँ नभन्नू ल–५’ मा अनुभव, दीलिप र निरुताका अलावा केकी अधिकारी, प्रियंका कार्की, स्वस्तिमा खड्कालगायतका कलाकारहरुको प्रमुख भूमिका छ । यस फिल्मबाट बाल–कलाकारमा सेड्रिना शर्मा र नव–अभिनेतामा अभिषेक नेपालले डेब्यु गरेका छन् ।